Egwuregwu Red Curly Hair B Cup Emma Finn 148CM TPE Okenye Mmekọahụ Mmekọahụ
Nwa bebi TPE,Stylekpụrụ bebi ndị Europe,C cup ụmụ bebi mmekọahụ,Lshụnanya
Maara na ụmụ agbọghọ na-acha uhie uhie bụ ndị kachasị ịhụnanya na mmụọ. Lelee mara mma nke mara mma nke nwere ahụ mara mma na ihu dị mma - ịchọghị ịhapụ ime ụlọ.
Emma nwere obi uto ma dikwa ndu, ma dika nwanne nwanyi ogologo, a gha enwe ihe anyi amaghi. Fọdụ bụ ihe ndị e kere eke, ma ha nwekwara obi ike. Amaghị m ihe kpatara ike jiri kwụsịtụ.
O nwere nro, o choro ibu onye egwu egwuregwu e-egwuregwu. Offọdụ nkwenkwe ya ga-esite n'oge ya dị ka onye na-akpọ oku. Mgbe ọ nwetara ọzụzụ siri ike, ọ nwere ike iji echiche ọ bụla mepụta Warcraft dị ike site na obere ikuku. Ma o nwekwara akụkụ nke adịghị ike.
"Ikekwe ọchịchọ onye ọ bụla dị iche, na n'ime ime obi m, ọ na-anụ m ọkụ n'obi inwe ezi ịhụnanya. N'otu oge ahụ, ọ na-agụsi m agụụ ike inwe mmekọahụ. Apụrụ m iche n'echiche nke inwe ịhụnanya kwa ụbọchị. Ahụtụbeghị ya. II nwere olile anya tufuo ndụ alụghị di ebe a. " Emma kwuru mgbe ọ bịara n’ụlọ ọrụ anyị.
Ọ bụ obere obodo dara ogbenye si United States. O nyerela ezinụlọ ya aka ịrụ ọrụ ụlọ kemgbe ọ bụ nwata. Ọrụ ndụ nyere ya ahụ dị ezigbo mma. Petite na ebughibu, nnukwu anya na-enwu gbaa. Obere na kọmpat B iko ara. Bọọlụ uhie uhie. Ọ bụghị dị ka nwa agbọghọ na-adịghị ike. Akpukpo aru ya kariri. Ọ bụ gị zuru okè n'anya. Kpọrọ ya laa. Will gaghị akwa ụta, n'ihi na ị maara, ọ nwere ike inye gị ọtụtụ echiche efu na obi ụtọ.
Nwere ike iji akụkụ a nke ọnụ, akụkụ ahụ, ike, nwee ike iji ọnụ nwee mmekọahụ, cumshot, gbasara ike na nnụnnụ tit. O nwekwara ike izute ọnọdụ ọ bụla ịchọrọ.
100% njem njem nzuzo - ọ dịghị onye ga-ama ihe dị n'ime, anyị lekwasịrị anya na ichedo nzuzo gị. Igbe ahụ enweghị aha mmado ọ bụla.
Emma si mbukota ndepụta:
Elu ： 141cm 157cm
Iko ： D B
Ibu ibu ： 63 lbs (29kg) 77 lbs (35kg)
N'úkwù ： 19, (48cm) 19, (48cm)
N'úkwù ： 30, (77cm) 30, (77cm)
Onyinye ： 7.1, (18cm) 7.1, (18cm)
Ntụ ： 6.7, (17cm) 6.7, (17cm)
Ọnụ: 4.7, (12cm) 4.7, (12cm)